I-epestural anesthesia ibangela ukulahlekelwa kobubele bomzimba osezantsi. Ngoluhlobo lwe-anesthesia, umama uyazi, kodwa ngokuqinisekileyo akave eziva intlungu, izihlunu ze-perineum zikhululekile, ezinceda ukunciphisa umngcipheko wokulimala kokubeleka kokubili kumama nomntwana. Funda kabanzi kwinqaku elithi "Amachiza ngenxa yentlungu ngexesha lobasebenzi".
Olu hlobo lwe-aneshesia lusetyenziswa ngokubanzi kwi-anesthesia yezabasebenzi kunye nokuzala, kunzima ngumxinzelelo wegazi ophezulu, i-gestosis, ukuveliswa kwe-breech ye-fetus, kunye nokusetyenziswa kwecandelo le-quarry. Imeko yentsana ichithwe yinkalo emininzi: "Impembelelo yokusetyenziswa kwamachiza kuxhomekeke kumlinganiselo wokusetyenziswa kweziyobisi, ubude bomsebenzi kunye nemeko yokuqala yomntwana; Kwiimeko ezinqabileyo, ngenxa yokusetyenziswa kwe-analgesia kwintsana, kunokuba nokuphefumula, kunye nokuhla kwezinga lentliziyo. Kodwa ngokubanzi, njengoko uphando lubonisa, i-epidural anesthesia iphephile kumama nomntwana. Ngoku siyazi indlela yokwenza i-anesthesia yezokwelapha ngexesha lokubeletha.
I-anesthesia yendawo isetyenziselwa ukuhlalutya izicubu ze-perineum, isetyenziselwa ukusetyenziswa kwe-episiotomy - ukuchithwa kwe-perineal, kwaye emva kokuhanjiswa, xa kusetshenziswe iigumbi. Kwimeko yomntwana lolu hlobo lwe-aneshesia aluchaphazeli.
I-anesthesia ngokubanzi isetyenziswa kuphela kwiimeko ezimbi kakhulu, ngokungafanekiyo - ngexesha lokusebenza kwecandelo lesaharenti. I-parturient is in state unconscious. Kwimimiselo yokuqala, xa umntwana esasesigodini se-uterine, i-analgesics ezikhuselekileyo zijojowe, ezingenakuchaphazela intsana. Kwiimeko ezinqabileyo, umntwana unokuba nokuhla kwezinga lentliziyo nokuphefumula. Njengomthetho, oku kwenzekayo xa kukho naluphi na ubunzima bezobuchwepheshe ekutsalweni kwintsana.
Inhalation anesthesia. Ngethuba le nkqubo, unina uzalisa i-anesthetic ngoncedo lweemaski ezikhethekileyo. Ininzi ngokuqhelekileyo ngenxa yale njongo isetyenziswa umxube we-nitrous oxide kunye ne-oxygen. I-nitroous oxide isisifo esibuthathaka. Indlela yokwenza i-anesthesia isekelwe kwintswelo yokunyameka kwinkqubo yesicelo sayo, okwenza ukuba iziphambano zingabonakali. Ukuba i-anesthesia ye-inhalation isetyenziselwa ixesha elide, inqanaba lentliziyo lingahle linciphise kwintsana, kwaye kukho amathuba okuba uzalelwe ngezantsi le-Apgar score. Olu hlobo lwe-anesthesia lwenkqubo ye-generic alunakuthi lisetyenziswe okwangoku.
I-Epidural anesthesia - ngeli xesha, i-catheter ekhethekileyo ifakwe kwisithuba phakathi kwegobolondo elukhuni lomtya womgogodla kunye ne-vertebrae, indawo ebizwa ngokuba yi-epidural space, kunye ne-agent ye-anesthetic yendawo ifakwe kuyo.
Ukuzala ngokuhlangeneyo nomyeni wakhe
Yintoni eyingozi kumama wokuzalwa ngaphambi kokuzalwa
Ukuhanjiswa kwekhaya: ingqiqo, ingozi
Ukuzalwa komntwana kunye nokuthunyelwa ngokwayo
Isiqu sokuba ufanise
Isobho "segolide" kunye neengwama kunye neenyama
Iklabishi yaseTshayina enegayi elibomvu
I-pizza "Iinyanga ezine"
Indlela yokwenza iimpahla eziphathekayo?
Uyilo lwangaphakathi olududuzayo
I-oligarch kunye nomntu ongenakhaya-unayo ikamva?
Utshintsho kwiMviwo yoBumbano obumbeneyo ngo-2015